Madaxweyne Farmaajo iyo Al Sisi oo wada hadal yeeshay (SAWIRRO) | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Madaxweyne Farmaajo iyo Al Sisi oo wada hadal yeeshay (SAWIRRO)
Madaxweyne Farmaajo iyo Al Sisi oo wada hadal yeeshay (SAWIRRO)
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) iyo Madaxweynaha Masar Mudane Cabdulfataax Al Sisi ayaa wada hadallo lagu sii xoojinayo xiriirka soo jireenka ah ee labada dal ku yeeshay magaalada Beijing ee dalka Shiinaha.
Labada Madaxweyne ayaa isla soo qaaday qaabkii loo xoojin lahaa xiriirka wadajirka ah iyada oo la sii wanaajinayo iskaashiga labada dhinac ee la dagaalanka argagixisada iyo xagjirnimada.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay sii adkeynayso xiriirka soo jireenka ah ee ka dhaxeeya labada dal ee walaalaha ah, wuxuuna sheegay inuu ka rajeynayo hormar intaas ka buuran.
Madaxweyne Sisi ayaa dhankiisa adkeeyay in Masar ay diyaar u tahay in ay gacan ku siiso Dowladda Federaalka Soomaaliya dadaallada ay ku xasilinayso dalka, isaga oo uga mahadceliyay Madaxweyne Farmaajo guulaha la taaban karo ee ay Dowladda Federaalku ku tallaabsatay bilihii la soo dhaafay.
Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Masar ayaa Shiinaha u jooga ka qeyb galka Madasha Iskaashiga Shiinaha iyo Afrika (FOCAC) oo si toos ah u furmaya berri.